समृद्धिको आधार महिला विकास «
अतः पहिलो चरणमा स्थानीय स्तरको निर्णायक तहमा पुग्नुभएका जनप्रतिनिधिहरूले अब स्थानीय निकायमा महिलालाई कसरी आर्थिक उपार्जनसँग जोड्ने हो ? कसरी महिला साक्षरता अभिवृद्धि गराउन सकिने हो ? कसरी बढीभन्दा महिलालाई राजनीतिमा सरिक गराउन सकिने हो ? कसरी महिलालाई उद्यमी बनाउने हो ? कसरी महिलालाई व्यवसायी बनाउने हो ? यो बारेमा गहन अध्ययनसाथ निर्णयहरू गर्नुप¥यो, जुन निर्णयले समग्र नेपाली महिलाको विकास होओस् । नेपाली महिलाहरूले आफ्नो भविष्य विदेशमा होइन, स्वदेशमै देखून् । ग्रामीण इलाका धेरै भएको नेपाल हराभरा होस्, कृषिको क्षेत्र विस्तृतीकरण होस्, पशुपालन व्यवसाय फस्टाओस्, जलविद्युत् उत्पादनबाट हुने लाभमा महिलाको पनि पहुँच पुगोस् । नेपाली महिलाहरू शिक्षित, चेतनशील र जागरूक होऊन् । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू के–कति कारणले गर्दा आर्थिक समृद्धिको मार्गमा लम्किरहेका छन् ? के उनीहरू रातारात ठूलाठूला उद्योग, कलकारखानाहरू खोलेर समृद्धिको मार्गमा लम्किएका हुन् त ? यस्ता कुरा कहीँ पनि सम्भव छैन । त्यसैले यस्ता कुराको खोजी गर्दै अहिलेलाई आमनेपाली महिलालाई जागरूक, सक्षम, चेतनशील र उद्यमशील मात्र बनाउन सकियो भने पनि त्यसपछि आउने समाजले समृद्धिको लाइन समाउन सक्छ । अहिले लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा यतिमात्र काम गर्न सकियो भने पनि नेपालले समृद्धिको मार्ग पक्रन सक्ला, अन्यथा महिलालाई यसो दिएजस्तो मात्र गर्ने र निर्णायक तहमा पुग्नबाट सधैं वञ्चित गरिरहने प्रथा दोहोरिँदै गयो भने न शासन व्यवस्था नै सार्थक होला, न त मुलुकको समृद्धि नै । — शारदा पौडेल